Adobe Reader (မြန်မာလို)
Acrobat အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . တစ်ကယ့်ကို အသုံးဝင်ပါတယ် .
Download mediafire ၊ Download ifile.it ၊ Download 4shared ၊ Download megaupload ၊ Download rapidshare